Shoulder Pain (ပခုံးအောင့်ခြင်း) - Hello Sayarwon
Shoulder Pain (ပခုံးအောင့်ခြင်း) ကဘာလဲ။
ပခုံးက ရွေ့လျားမှုအမျိုးမျိုးကို လုပ်ပေးနေရပါတယ်။ ပခုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ခုခုမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာ လွတ်လွတ်လပ်လပ်မလှုပ်ရှားနိုင်တော့ပဲ နာကျင်မှုနဲ့မသက်မသာဖြစ်မှုကို ဖြစ်စေပါတယ်။
ပခုံးအေင့်ခြင်းက ပခုံးအဆစ်၊ ပတ်ပတ်လည်လည်ကြွက်သားတွေ အရွတ်တွေအကြောတွေကနေ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အဆစ်ကြောင့်ပခုံးအောင့်ခြင်းက လက်မောင်းပခုံးကို လှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်လိုက်တဲ့အခါတိုင်း ပိုဆိုးသွားနိုင်ပါတယ်။
နှလုံးရောဂါ၊ သည်းခြေရောဂါလိုမျိုး ရင်ဘတ်ဝမ်းဗိုက်တွင်းကလီစာတွေကို သက်ရောက်တဲ့ရောဂါတွေက ပခုံးအောင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေပါတယ်။ အခြားအင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းနာခြင်းကြောင့် ပခုံးအောင့်ခြင်းကို လွှဲပြောင်းနာကျင်ခြင်းလို့ခေါ်ပါတယ်။ လွှဲပြောင်းပခုံးအောင့်ခြင်းက ပခုံးကိုလှုပ်ရှားမှုပြုတဲ့အခါမှာ ပိုဆိုးသွားလေ့မရှိပါဘူး။
Shoulder Pain (ပခုံးအောင့်ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
Shoulder Pain (ပခုံးအောင့်ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ပခုံးအောင့်ခြင်းရဲ့ အဖြစ်အများဆုံးရောဂါလက္ခဏာတွေကတော့ ပခုံးလှုပ်ရှားမှုပြုလုပ်လိုက်တဲံအခါမျာ နကျင်ခြင်းနဲ့မသက်မသာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
Shoulder Pain (ပခုံးအောင့်ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
ပခုံးက လှုပ်ရှားမှုတော်တော်များများကိုပြုလုပ်နိုင်တဲ့ ball and socket jointအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအဆစ်က ပိုပြီးထိခိုက်ဖို့လွယ်ပါတယ်။ ပခုံးအောင့်ခြင်းက အောက်ပါအခြေအနေတစ်ခုသို့ တစ်ခုထက်ပိုတြဲ့အချက်တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
Shoulder Pain (ပခုံးအောင့်ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
ဘယ်အရာတွေက ပခုံးအောင့်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေပါသလဲ။
ပခုံးအောင့်ခြင်း ဖြစ်ပွားနိုင်ချေကိုမြင့်စေတဲ့အကြောင်းရင်းတွေ အများကြီးရှိပါတယ်။ ဥပမာအားဖြင့်
Shoulder Pain (ပခုံးအောင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
ပြင်းပြင်းထန်ထန်နာကျင်ခြင်းကိုဖြစ်စေတဲ့ ယာယီထိခိုက်မှုဖြစ်ခြင်းမျှာဆိုရင် တတ်နိုင်သမျှမြန်မြန်ကုသမှုပေးဖို့လိုပါတယ်။ နာကျင်မှုကသိပ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင် ရက်အနည်းငယ်အနားယူလိုက်ခြင်းဖြစ့် သက်သာနိုင်ပါတယ်။ လက္ခဏာတွေကကြာရျည်နေမယ်ဆိုရ်ငတော့ ဆရာဝန်နဲ့ပြသပါ။
ဆရာဝန်က ပခုံးအောင့်ခြင်းအကြောင်းရင်းကို သိရဖို့အဖြေရှာပါလိမ့်ယ်။ ပြီးတာနဲ့ပဲ ကုသမှုပေးပါလိမ့်မယ်။
ပထမဆုံးအဆင့်က နှံ့စပ်တဲ့ရာဇဝင် ရာဇဝင်ကိုနှံ့နှံ့စပ်စပ်မေားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က ဘယလိုမျိုးဘယ်အချိန်မှာနကျင်မှုစခဲလဲ မနာခင်မှာ ဘယ်လိုဖြစ်ထားတာလဲ၊ ဘယလိုကုသမှုပေးထားလဲနြ့ သင့်ရဲပအထွေထွေကျန်းမာရေးနဲ့ သင့်ပခုံးပြဿနာရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေအကြေင်းရင်းကို သိဖို့အတွက် မေးခွန်းတွေမေးပါလိမ့်မယ်။ အများစုမှာ အချိုသောလှုပ်ရှာမးှုကြောင့်ပိုဆိုးလာတတ်ပြီး အချို့သောလှုပ်ရှားမှုတွေကြောင့် သကာ်စေပါတယ်။ နာကျင်မှုအရင်းအမြစ်ကိုရှာရာမှာ ကျန်းမာရေးရာဇဝင်က အထောက်အကူပြုပါတယ်။
အကြောင်းရင်းကိုရှာဖို့ စမ်းသပ်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဆရာဝန်က ပခုံးနဲ့ပတ်သက်ပြိးမှုမမှန်မှုတွေ၊ ရော်ငရမ်းခြင်း၊ ပုံပျက်ခြင်း၊ ကြွက်သားအားနည်းခြင်းရှိမရှိနဲ့ တင်းနေတဲ့နေရာတွေကို စမ်းသပ်စစ်ဆေးပါလိမ့်မယ်။ သင့်ပခုံးလှုပ်ရှားမှုအတိုင်းအတာနဲ့သန်မာမှုကိုလည်း စမ်းသပ်ပါလိမ့်မယ်။
ဆရာဝန်က နာကျင်မှုအကြောင်းရင်းနဲ့အခြားသောပြဿနာတွေကို အဖြေရှာနိုင်ဖို့ တိကျတဲ့စစ်ဆေးနည်းတွေကိုလည်း အသုံးပြုပါလိမ့်မယ်။
အိက်စ်ရေး- ပခုံးအဆစ်ကိုဖြစ်စေတဲ့အရိုးုတွေမှာ ထိခုက်မှုရှိမရှိပြသပေးပါတယ်။
အမ်အာအိုင်နဲ့အယ်ထရာဆောင့်း- ပုံရိပ်ဖော်ခြင်းနည်းတွေက အရိုးမဟုတ်တဲ့တစ်ရှူးတွေရဲ့ပုံရိပ်ကေင်းကောင်းရဖို့ကူညီပေးပါတယ်။ ဆရာဝန်က အဆစ်ပတ်ပတ်လည် အရွတ်နဲ့အကြောတွေ ထိခိုက်မိခြင်းရှီမရှိ သိနိုင်ပါတယ်။
စီတီစကန်- အိက်ရေးနဲ့ကွန်ပြူတာနည်းပညာပေါင်းစပ်ထားခြင်းဖြ်စပြီး ပခုံးပတ်ပတ်လည်အရိုးတွေရဲ့အသေးစိတ်ပုံရိပ်ကို ရရှိစေပါတယ်။
လျှပ်စစ်သုံးပြုခြင်း- ဆရာဝန်က နာဗ်ရဲပလုပ်ဆောင်ရည်ကငိုသိရှီဖို့အတွက် အီအမ်ဂျီလိုမျိုး စစ်ဆေးနည်းတွေကိုလည်း ပြုလိုပ်ုနိင်ပါတ်ယ။
အာသရိုဂရမ်- အိက်စ်ရေးရိုက်နေစဉ်အတွင်း ပခုံးထဲကိုဆိုးဆေးထိုးထည့်လိုက်ပြီး အဆစ်နဲ့ပတ်ပတ်လည်ကြွက်သားတွေနဲ့အကြောတွေကို ကောင်းကြေင်းမြင်ရစေပါတ်။
အဆစ်အတွင်းမှန်ပြောင်းထည့်ကြည့်ခြင်း- ဖိုင်ဘာ အော့ပ်တစ်ကင်မရာနဲ့ အဆစ်အတွင်းကြည့်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အဆစ်အတွင်းမှန်ပြောင်းကြည့်ခြင်းက ကိုယ်ခနဓါစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေကနေ အိက်စ်ရေးနဲ့အခြားသောစမ်းသပ်ခြင်းတွေကနေ မမြင်ရတဲ့အရိုးမဟုတ်တဲ့တစ်ရှူးတွေထိုက်မိခြင်းကိုပြသပေးပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကိုရှာပေးနင်တဲ့အပြင် အဆစ်ကိုပြုပြင်ရာမှာလည်း အကူအညီပေးနိင်ပါတယ်။
Shoulder Pain (ပခုံးအောင့်ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
ကုသမှုက အနားယူခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုကိုပြေင်းလဲပြုပြင်ခြင်းနဲ့ ပခုံးသန်မာဖို့နဲ့ ပျော့ပြေင်းဖု့ိရုပ်ပိုင်းဆိင်ရာကုထုံးတွေ ပါဝင်ပါတယ်။ အလွန်အမင်းအသုံးပြုခြင်း၊ လှုပ်ရှားမှုများများလုပ်ခြင်းစတာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ငြခ်းက ပခုံးအေင့်ခြင်းကိုကာကွယ်ရာမှာ အကူအညီပေးပါတယ်။
ဆရာဝန်က ရောင်ရမ်းခြင်းနဲ့နာကျင်ခြင်းကိုသက်သာစေဖိုပ ဆေးတွေပေးပါလိမ့်မယ်။ ဆေးတွေက နာက်ျငမှုသက်သာဖို့အတွက်အဆိုရင် ညွှန်ကြားထားတဲ့အတိုင်းသောက်သင့်ပါတယ်။ ဆရာဝန်က နာကျင်မှုကိုသက်သာဖို့အတွက် စတီးရွိုက်များ ထုံဆေးများထိုးခြင်းကိုလည်း ပြုလုပ်ခိုင်းနိုင်ပါတယ်။
အချိုပသောပခုံးပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းဖို့အတွက် ခွဲစိတ်ဖို့လိုပါတယ်။ လူနာ၉၀ရာနှုန်းမှာ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှိုကိုပြေင်လးဲပြုပြင်ခြင်း၊ အနားယူခြင်း၊ လေ့က်ျင့ခန်း၊နဲ့ဆေးမှီဝဲခြင်းစတဲ့ ရိုးရှင်းတဲ့ကုသမှုနဲ့တင် သက်သာသွားပါတယ်။
ခဏခဏအဆစ်လွဲခြင်း၊ နဲ့ ပတ်လည်ကြွက်သားတွေဆုတ်ပြဲသွားခြင်းစတဲ့ ပခုံးပြဿနာတွေက လေ့ကျင့်ခန်းပြုလုပ်ခြင်းကြောင့် မသက်သာနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ စောစောစီးစီးခွဲစိတ်ကုသဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
ခွဲစိတ်ခြင်းက အမာရွတ်တစ်ရှူးတွေကိုဖယ်ရျားဖို၊ ပျက်စီးသါားတဲ့တစ်ရှူးတွေကိုပြုပြင်ဖို့ အဆစ်အတါင်းမန်ပြောင်းကြည့်ခြင်း၊ ကြီးမားတဲ့ပြုပြင်မှုကြီးတွေအတွက် ပခုံးအဆစ်ပြန်လည်အစားထိုးခြင်းအတွက် အဆစ်ဖွင့်ခွဲစိတ်ခြင်းတွေပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ လူနေမှုပုံစံများနဲ့ အိမ်သုံးကုထုံးများက သင့်အနေဖြင့် ပခုံးောဆာင့်ြခ်းကိုကုသတဲ့နေရာမှာနဲ့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်နေတဲ့နေရာတွေမှာ အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်။
ကိုယ်လက်လှုပ်ရျားမှုများ အလွန်အကျွံ့ပြုခြင်းမှ ရှောင်ခြင်း
1. What causes shoulder pain? 32 possible conditions.
http://www.healthline.com/symptom/shoulder-pain, Accessed 17 Apr 2017.
http://www.mayoclinic.org/symptoms/shoulder-pain/basics/definition/sym-20050696. Accessed 17 Apr 2017
http://www.nhs.uk/Conditions/shoulderpain/Pages/Introduction.aspx. Accessed 17 Apr 2017
4. Pain Management: Neck and Shoulder Pain.
http://www.webmd.com/pain-management/guide/neck-shoulder. Accessed 17 Apr 2017